အိတ်ဇ်ရေး - ဝီကီပီးဒီးယား
(အိတ်စ်ရေး မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အိတ်ဇ်ရေး (အင်္ဂလိပ်: X-ray) ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်သံလိုက်ရောင်ခြည် တစ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်။ အိဇ်ရေးတွင် လှိုင်းလျား အနေဖြင့် ၀.၀၁ နာနိုမီတာမှ ၁၀ နာနိုမီတာ အတွင်း ရှိသည်။ ထိုလှိုင်းလျားကို သတ်မှတ်ဖော်ပြသော ကြိမ်နှုန်းမှာ ၃၀ ပီတာဟတ်ဇ် မှ ၃၀ အိတ်ဇာဟတ်ဇ် အတွင်း ဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်အားဖြင့် ၁၂၀ အီလက်ထရွန်ဗို့မှ ၁၂၀ ကီလို အီလက်ထရွန်ဗို့ အတွင်းတွင် ရှိသည်။ အိဇ်ရေးသည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် နှင့် ယှဉ်လျှင် လှိုင်းလျား တိုပြီး ဂမ်မာရောင်ခြည်ထက် လှိုင်းလျား ပို၍ ရှည်သည်။ ဘာသာစကား အမြောက်အမြားတွင် အိတ်ဇ်ရေးကို ရော့ဂျန် ရောင်ခြည် (Röntgen radiation) ဟု ခေါ်ဆိုလေ့ ရှိကြပြီး အိတ်ဇ်ရေးကို စတင် တွေ့ရှိသူ ဝီလ်ဟမ်ကော်နရက်ရော့ဂျန်ကို ဂုဏ်ပြု၍ ခေါ်ဆိုကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သူသည် အမျိုးအမည်မသိသော ရောင်ခြည် တစ်မျိုးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် အမည်မသိ X ဟု အမည်ပေးခဲ့ရာမှာ အိတ်ဇ်ရေးဟု အမည်တွင်ခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
အိတ်ဇ်ရေးသည် လျှပ်စစ်သံလိုက် ဖြာထွက်ရောင်ခြည် စာရင်း၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်သည်။
အလင်းရောင်ခြည် (X-rays) သည် ဖန်ကို ဖောက်ထွင်းသွားနိုင်သော်လည်း၊ သစ်သား၊ သံစသည်တို့ကိုမူ မဖောက်ထွင်းနိုင်ပေ။ ဤအချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့သည် မြင်တွေ့နေကျဖြစ်၍ အထွေအထူး စဉ်းစားခြင်း၊ အံ့ဩခြင်းမဖြစ်တော့ချေ။ သို့သော် သစ်သား၊ သံစသည်တို့ကိုပင် ဖောက်ထွင်းနိုင်သည့် ရောင်ခြည်တစ်မျိုးရှိသည်ဟုဆိုလျှင်ကား ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ အံ့ဩစရာဖြစ်လာလေသည်။ ဤသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလင်းရောင်ခြည် တစ်ခုတည်းသာလျှင် ရောင်ခြည်ဆို၍ရှိပြီးလျှင် အလင်းနှင့်ရောင်ခြည်ကို အတူတူပင်ဖြစ်သည်ဟု မှားယွင်းစွာ ထင်မှတ်နေမိသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်။ အမှန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်သောအလင်းရောင်ခြည်အပြင် အခြားရောင်ခြည်များ အများအပြားပင်ရှိသေး၍၊ အိပ်စရေးသည် ထိုရောင်ခြည်တို့အနက် တစ်မျိုးအပါအဝင်ဖြစ်သည်။
အိပ်စရေးရောင်ခြည်ကို ၁၈၉၅ ခုနှစ်တွင် ဂျာမန်သိပ္ပံ ပညာရှင် Wilhelm Röntgen က အခြားကိစ္စတစ်ခုကို စမ်းသပ်ရှာဖွေလျက်ရှိစဉ် ကံအားလျော်စွာ စတင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤရောင်ခြည်ကိုသာ မတွေ့ရှိသေးပါက သိပ္ပံပညာသည် ယခုလောက်တိုးတက်လာနိုင်ရန် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြန့်ကြာဦးမည်ဖြစ်ရာ အဆိုပါ ရောင်ခြည်ကို ယခုလို မမျှော်လင့်ဘဲအခန့်သင့်တွေ့ရှိလိုက်ခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တကွ နောင်လာနောက်သားတို့အဖို့ ကံကောင်းလှသည်ဟုဆိုရပေမည်။ ဤရောင်ခြည်ကို တွေ့ရှိကြောင်းသတင်းနှင့်အတူ ရောင်ခြည်ကိုတွေ့ရှိသူ၏အမည်သည်လည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ချက်ချင်းပင်ပျံ့နှံ့ကျော်ကြား၍ သွားလေတော့သည်။ တွေ့ရှိစအချိန်တွင် သူသည် ဤရောင်ခြည်၏ထူးဆန်း သောသတ္တိကို နားမလည်နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်သည့်အတွက် ဤရောင်ခြည်ကို အိပ်စရေးဟု မှည့်ခေါ်လိုက်သည်။ x မှာ အက္ခရာသင်္ချာတွင် မသိသေးသောအရာကို ကိုယ်စားပြု သည့်အက္ခရာဖြစ်၍ Ray မှာ ရောင်ခြည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ပေး သောစကားဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ဤရောင်ခြည်ကိုစတင်တွေ့ရှိ သူမှာ ဂျာမနီနိုင်ငံ ဝပ်စဗပ်မြို့ရှိတက္ကသိုလ်မှ ရူပဗေဒပါမောက္ခ ဖြစ်သူ ဝီလဟမ်းကွန်းနရတ်ဖွန်ရန့်ဂင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဤရောင်ခြည်ကို ရန့် ဂင်းရေး(ရန့်ဂင်းရောင်ခြည်) ဟုလည်း အခေါ်များကြလေသည်။
ပါမောက္ခရန့်ဂင်းသည် ကရုပြွန်တစ်လုံးဖြင့် စမ်းသပ် လျက်ရှိစဉ် ထိုပြွန်အနီးတွင်ထားမိသော ဗေရီယမ်ပလတ္တီနိုဆိုင်း ယင်းနိုက်ခေါ် ဓာတ်ဆားပွင့်အချို့သည် ညဉ့်ကြည့်နာရီကဲ့သို့ တောက်ပစွာအရောင်ထွက်လာခြင်းကို သတိပြုမိသည်။ ကရုပြွန် ဟုအမည်တွင်ခြင်းမှာ ဆာဝီလျှံကရုဆိုသူက စတင်တီထွင်ခဲ့ သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကရုပြွန်သည် ပ်နှစ်ဖက်ပိတ်ဖန်ပြွန် ဖြစ်၍ အတွင်းမှလေကို စုတ်ထုတ်ပြီးလျှင် လျှပ်စစ်ဓာတ်ခေါင်း နှစ်ခုကို ထိပ်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှ ဖန်သားတွင် မြှုပ်သွင်းထား သည်။ ဓာတ်ခေါင်းတို့ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်ဆက်ပေးလိုက်သော အခါ ဓာတ်မခေါင်းဘက်မှ ဓာတ်ဖိုခေါင်းဘက်သို့သွားသော အလင်းရောင်ခြည် တစ်မျိုးထွက်ပေါ်လာသည်။ သိပ္ပံပညာတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖိုခေါင်းကိုအန်နုတ်၊ ဓာတ်မခေါင်းကို ကက်သုတ် ဟုခေါ်သဖြင့် အဆိုပါဓာတ်မခေါင်းမှ ထွက်ပေါ်လာသော ရောင်ခြည်ကို ကက်သုတ်ရေး(ကက်သုတ်ရောင်ခြည်)ဟု ခေါ် လေသည်။ ရန့်ဂင်းသည် ထိုကရုပြွန်ကို စက္ကူအနက်ဖြင့်ရစ် ပတ်ထားသဖြင့် ကက်သုတ်ရောင်ခြည်သည် ဖန်နှင့်တကွပြွန်ကို ဖုံးထားသောစက္ကူအနက်တို့ကို ဖောက်ထွင်ပြီး ထွက်မလာနိုင် ပေ။ ထို့ကြောင့် အထက်တွင်ဖော်ပြသည့်အတိုင်း ပြွန်အနီးရှိ ဓာတ်ဆားပွင့်များ အရောင်ထွက်လာရခြင်းမှာ ပြွန်အတွင်းမှ မျက်စိဖြင့်မမြင်ရသော အခြားရောင်ခြည်တစ်မျိုး ထွက်လာ၍ သာဖြစ်ရမည်ဟုရိပ်မိလေသည်။ ရိပ်မိသည့်အတိုင်း စက္ကူအနက် နှင့်ရစ်ပတ်ထားသော ပုံဖမ်းဓာတ်ပုံမှန်များဖြင့် ထမ်မံစမ်းသပ် ပြန်ရာ ပြွန်အတွင်းမှ အဆိုပါရောင်ခြည်ဆန်း ထွက်ပေါ်လာ ခြင်းကို အသေအချာသိရလေသည်။
သိပ္ပံဆရာကြီးအသီးသီးတို့၏ လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များ အရ ကက်သုတ်ရောင်ခြည်တွင် အလွန်သေးငယ်သော မြူများ ပါဝင်၍ မြူမှုန်တို့မှာ အီလက်ထရွန်ခေါ် လျှပ်စစ်အမဓာတ်ဝင် နေသည့် မြူမှုန်များဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ အီလက်ထရွန် တို့သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖိုခေါင်းကို အရှိန်ပြင်းစွာဖြင့် ရိုက်ခတ် သောအခါ ဓာတ်ဖိုခေါင်းလုပ်ထားသည့် သတ္တု၏အက်တမ်များ အတွင်းသို့တိုင်အောင်စူးဝင်ကြသည်။ ထိုအခါ အဆိုပါအက်တမ် တို့၏ ဝတ်ဆံနှင့်အနီးဆုံးဖြစ်သော အီလက်ထရွန်တို့၏ အနေ အထားဖွဲ့စည်းပုံ ပျက်ပြားပြောင်းလဲသွားရာမှ အိပ်စရေး ရောင်ခြည်ထွက်ပေါ်လာရသည်ဟု ဆိုလေသည်။
၁၉၁၂ ခုနှစ်တွင် ဗရက်၊ မော့စလီ၊ ဖွန်လောင်းအား စသော သိပ္ပံဆရာကြီးများ၏ စမ်းသပ်ချက်များအရ အိပ်စရေး ရောင်ခြည်သည် ပွင့်ပုံရှိသောပစ္စည်းတစ်ခုခုအပေါ်သို့ ကျရောက် သောအခါ စိတ်ဖြာ၍ထွက်သွားပြီး သက်တံစင်းဖြစ်ပေါ်စေသည် ကို တွေ့ရှိရသည်။ ဤသို့တွေ့ရှိခြင်းမှာ အိပ်စရေးသည် ကက် သုတ်ရောင်ခြည်ကဲ့သို့ အီလက်ထရွန်များ စီးလျက်ရှိသည့် အီလက်ထရွန်စီးကြောင်းမဟုတ်ပဲ အလင်းနှင့် လွန်စွာတူသော ဖြာထွက်မှုစွမ်းအင်မျိုးဖြစ်ရမည်ဆိုသည့် ယူဆချက်ကို ပိုမို၍ ခိုင်လုံသွားစေလေသည်။ အဆိုပါသက်တံစင်းများကို စပက်တြို ဂရမ်ဟုခေါ်၍ ဤသက်တံစင်းများကို ပုံဖမ်းဓာတ်မှန်ပေါ်သို့ ကျရောက်စေခြင်းဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ယူနိုင်သည်။ ထိုဓာတ်ပုံများ မှာ အက်တမ်တို့၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုလိုက်၍ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု မတူကြပေ။ ဤဓာတ်ပုံများကို အသေးစိတ်လေ့လာ တိုင်းတာကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အက်တမ်တို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံတို့ကို သိရှိနိုင်ပေရာ ဤသို့အိပ်စရေးသက်တံစင်းအားဖြင့် အက်တမ် အသီးသီး၏ ဖွဲ့စည်းပုံလေ့လာသည့်နည်းကို အိပ်စရေးစပက်စ တြိုစကုပ်ပီဟုခေါ်သည်။
အိပ်စရေးသည် အမှန်အားဖြင့်လျှပ်စစ်သံလိုက်ရောင်စဉ် ခေါ် ရှိသမျှရောင်ခြည် မျိုးပေါင်းစုံပါဝင်သော ရောင်စဉ်တွင် တစ်စိတ်တစ်ဒေသပါဝင်သည့် ရောင်ခြည်ဖြစ်သည်။ ထိုရောင် စဉ်တွင်ပါဝင်သော ရောင်ခြည်အားလုံးတို့၏ အသွားနှုန်းသည် အလင်း၏အသွားနှုန်းနှင့် ထပ်တူပင်ဖြစ်၍ လှိုင်းအတိုအရှည် တွင်သာကွာခြားကြသည်။ ရောင်စဉ်၏အလယ်နားတွင် မျက်စိ ဖြင့်မြင်နိုင်သော အလင်းရောင်ခြည်များရှိ၍ ယင်း၏ဘေး တစ်ဖက်တွင် ထိုအောက် လှိုင်းတိုသောရောင်ခြည်များရှိသည်။ ထိုရောင်ခြည်တို့မှာ အာလတြာဗွိုင်အိုလက်ခေါ် ခရမ်းဘေး ရောင်ခြည်၊ အိပ်စရေးရောင်ခြည်၊ ဂမ္မာရောင်ခြည်တို့ဖြစ်ကြ သည်။ ထို့ကြောင့် အိပ်စရေးရောင်ခြည်သည် အလင်းလှိုင်းတို့ ထက် လှိုင်းအလျားတိုသည့် ရောင်ခြည်အစုတွင်ပါဝင်သည်။ အိပ်စရေးရောင်ခြည်တွင် လှိုင်းအတိုအရှည်ကွဲပြားသော ရောင်ခြည်အစားစားပါဝင်သည်။ အိပ်စရေးအမာ၊ သို့မဟုတ် လှိုင်းတိုများမှာ အိပ်စရေးအပျော့၊ သို့မဟုတ် လှိုင်းရှည်များ ထက် အရာဝတ္ထုတို့ကို ပိုမို၍ ထိုးဖောက်နိုင်လေသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်မခေါင်းမှ ထွက်လာသည့် အီလက်ထရွန် တို့၏ အရှိန်မြန်လေလေ ထွက်ပေါ်လာသော အိပ်စရေးရောင် ခြည်တို့သည် သာ၍အားကောင်းလေလေဖြစ်သည်။ ထို့အတွက် လျှပ်စစ်ခေါင်းနှစ်ခုမှာ ဓာတ်အားခြားနားမှုများလေ ကောင်းလေ ဖြစ်သည့်အတိုင်း ယခုခေတ်သုံး အလွန်အားကောင်းသော အိပ်စ ရေးပြွန်တို့တွင် ဗို့အားသိန်းသန်းအထိရှိသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကို အသုံးပြုထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ အချို့ အိပ်စရေးပြွန် တို့တွင် ဗို့အားတစ်သန်းပင် ကျော်ပေသေးသည်။
အိပ်စရေးကို ယခုအခါ အလွန်အရေးပါ အရာရောက် သော ကိစ္စအများတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် အရာ ဝတ္ထုတို့ကို ထွင်းဖောက်နိုင်သောသတ္တိကြောင့် ယခင်က အိပ်စ ရေးကို အသုံးချခဲ့သူများသည် နောင်သော် အသားအရေများ လောင်ကျွမ်းခံရပြီးလျှင် အချို့မှာ သေလောက်အောင်ပင် ဘေး အန္တရာယ်များခဲ့ရပေသည်။ ယခုအခါ၌မူ အဆိုပါ ဘေးရန်များမှ ကာကွယ်နည်းများ ပေါ်ပေါက်လာပြီဖြစ်၍ အိပ်စရေးကို စိတ်ချ စွာ အသုံးပြုနေနိုင်ကြပေပြီ။
အိပ်စရေးရောင်ခြည်သည် အရာဝတ္ထုတို့ကိုထွင်းဖောက် နိုင်သည်ဆိုသော်လည်း အသားအရေ သစ်သား စသော သိပ် သည်းခြင်းနည်းသည့်ပစ္စည်းများကိုသာ လွယ်ကူစွာ ထွင်းဖောက် နိုင်၍ ကျောက်သတ္တုစသော သိပ်သည်းခြင်းများသည့် ပစ္စည်း များကိုမူ အထက်ပါပစ္စည်းတို့လောက် လွယ်ကူစွာ ထွင်းဖောက် နိုင်ခြင်းမရှိချေ။ အိပ်စရေးရောင်ခြည်နှင့် ထိတွေ့သည့်အခါ အချို့ဓာတ်ပစ္စည်းများသည် အရောင်ထွက်၍ အခံမျက်နှာပြင်ပေါ် ၌ အရိပ်ပေါ်တတ်သည်။ ဇင့်ဆာလဖိုက်ဓာတ် သုတ်လိမ်းထား သော အပြားတစ်ခုခုကို လက်၏နောက်မှခံ၍ လက်ရှေ့ရှိ အိပ်စရေးပြွန်မှ ရောင်ခြည်လွှတ်လိုက်သော် နောက်ခံအပြား တွင် လက်ရိုးရိုးအရိပ်ပေါ်လာသည်ကို တွေ့ရပေမည်။ ယင်းသို့ အရိပ်ဖော်ပေးသောကိရိယာကို ဖလူအိုရိုစကုပ်ခေါ် ဓာတ်မှန် ကိရိယာဟုခေါ်သည်။ ဤအရိပ်ကို ပုံဖမ်းဓာတ်မှန်ဖြင့် ကူးယူ ပါက ရေဒီယိုဂရပ် (ဓာတ်မှန်ပုံ) ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ခေါ်လေ့ရှိ သော အိပ်စရေးဓာတ်ပုံကို ရလေသည်။
အိပ်စရေးရောင်ခြည်ကို အဓိက အသုံးပြုသူများမှာ ဆရာဝန်များနှင့် သွားစိုက်ဆရာများပင်ဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်တို့ သည် လူနာ၏ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းပိုင်း အခြေအနေကို အိပ်စရေး ဓာတ်ပုံဖြင့် လေ့လာစစ်ဆေးနိုင်သည်။ အိပ်စရေးဓာတ်ပုံကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောရောဂါကိုသာ စစ်ဆေးနိုင် သည်မဟုတ်၊ နောင်ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ရောဂါများကိုပင်ကြိုတင် ၍သိရှိထားနိုင်သည်။ အရိုးကျိုး၍ ဆက်ထားသောနေရာကို အံကိုက်မကိုက် စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ကိုယ်တွင်း၌ဝင်နေသော ကျည်ဆန်ကိုလည်း လွယ်ကူစွာရှာဖွေ၍ ခွဲထုတ်နိုင်သည်။ သွား စိုက်ဆရာဝန်များအဖို့မှာ သွားတို့၌ ဖြစ်ပွားတတ်သော အနာ အမျိုးမျိုးကို မကုသမီ အိပ်စရေးဓာတ်ပုံဖြင့် လေ့လာစစ်ဆေး နိုင်ကြလေသည်။
အိပ်စရေးရောင်ခြည် သက်သက်ဖြင့်လည်း ကင်ဆာ ရောဂါ၊ ယဉ်းနာ၊ ရောင်နာနှင့် အခြားအနာများကို ကုသနိုင် လေသည်။ သို့ရာတွင် အိပ်စရေးရောင်ခြည်ကို လိုသည်ထက် ပို၍ ကြာကြာဖြစ်စေ၊ များများဖြစ်စေပေးမိပါက လူကိုအန္တရာယ် ပေးတတ်လေသည်။ အိပ်စရေးကို စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများစွာတွင်လည်း တစ်နေ့တစ်ခြားတိုးချဲ့၍ ထိရောက်စွာ အသုံးပြုလာကြပြီ။ အထုူးသဖြင့် ပြုလုပ်ပြီးပစ္စည်းများ၏ အတွင်းပိုင်းအခြေအနေကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာတွင် အသုံးများလေသည်။ ရဲအရာရှိများ၊ အကောက်အရာရှိများသည် မိမိတို့ မသင်္ကာသော ကုန်ထုပ်များ အတွင်း၌ မည်သို့သောပစ္စည်းများပါသည်ကို လွယ်ကူစွာကြည့်ရှု နိုင်ရန် အသုံးပြုကြသည်။ စိန်၊ ပုလဲ စသည့် အဖိုးတန် ကျောက်မျက်ရတနာများ စစ်သည်၊ မစစ်သည်ကိုလည်း အိပ်စ ရေးကိရိယာနှင့်ပင် စစ်ဆေးနိုင်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်နှင့်ဆိုင် သောကိရိယာတို့တွင် အတွင်းရှိကြေးနန်းကြိုးများ ပြတ်တောက် နေခြင်းရှိ မရှိကိုလည်း စစ်ဆေးနိုင်သည်။ သံ၊ သံမဏိ၊ သတ္တု တို့ဖြင့် သွန်းလုပ်ရသော ပစ္စည်းကိရိယာ အမျိုးမျိုးအတွင်း၌ အနာအဆာ ပါ မပါကို စစ်ဆေးရာတွင်လည်း ယခုအခါ အိပ်စရေးကို တွင်တွင်ကြီး ထိရောက်စွာ အသုံးပြုလျက်ရှိကြ ပေပြီ။ ရှေးပန်းချီကျော်ကြီးတို့၏ လက်ရာဟုထင်ရသော ပန်းချီကားများကို အိပ်စရေးကိရိယာဖြင့် အတုနှင့်အစစ် ခွဲခြား ပြနိုင်သည်။ ဤမျှသာမဟုတ်သေး၊ အိပ်စရေးတွင် အခြားအသုံး ဝင်သည့်အချက် အမြောက်အမြားရှိသေးသည်။ ဟက်ဖနီယမ်ဟု ခေါ်သော ဓာတုဒြပ်စင်အသစ်ကို အိပ်စရေးရောင်ခြည် အသုံးချ ခြင်းဖြင့်ပင်လျှင် တွေ့ရှိခဲ့လေသည်။
↑ David Attwood (1999)။ Soft X-rays and extreme ultraviolet radiation။ Cambridge University။ p. 2။ ISBN 978-0-521-65214-8။ 12 April 2011 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ X-Rays။ NASA။ 22 November 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ November 7, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wikimedia Commons တွင် X-ray နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
ဝစ်ရှင်နရီ၊ အခမဲ့အဘိဓာန်တွင် X-ray ကို ရှာဖွေကြည့်ရှုပါ။
A Photograph of an X-ray Machine Archived 10 August 2007 at the Wayback Machine.
What is Radiology? Archived 29 July 2010 at the Wayback Machine.asimple tutorial
50,000 X-ray, MRI, and CT pictures Archived5August 2010 at the Wayback Machine. MedPix medical image database
Index of Early Bremsstrahlung Articles Archived 30 November 2016 at the Wayback Machine.
Extraordinary X-Rays Archived 27 June 2010 at the Wayback Machine. – slideshow by Life
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အိတ်ဇ်ရေး&oldid=701713" မှ ရယူရန်
၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။